One of the best Travels and Tours & Car Rental Service in Myanmar | Yangon – Bangkok – Pattaya – Bangkok
Yangon – Bangkok – Pattaya – Bangkok
Coverage : Yangon – Bangkok – Pattaya – Bangkok
Day 01. Yangon – Bangkok – Pattaya
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် မှတစ်ဆင့် ဘန်ကောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိပါမည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ပတ္တရားမြို့သို့ ဆက်လက် ထွက်ခွာပါမည်။ နေ့လည်စာကိုလမ်းတွင်သုံးဆောင်ပြီးလေဆာဗုဒ္ဓ၊ ဝိုင်ခြံအစရှိသည်တို့ကိုဝင်ရောက်လည်ပတ်ပါမည်။ ထို့နောက် ပန်းမျိုးစုံ ၏ အလှများအား ကြည့်ရှု ခံစားရင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးနိုင်ရန် NongNooch Garden သို့ပို့ဆောင်ပြီးညစာကိုသုံးဆောင်ပါမည်။ ညနေတွင် Lady Boy များကပြဖျော်ဖြေသော Alcazar Show ပွဲသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုကြပါမည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ညစာသုံးဆောင်ပြီး Pattaya Night Bazaar တွင် ဈေးဝယ် ထွက်ကြပါမည်။ ထို့နောက် Hotel တွင် ပြန်လည်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 02. Pattaya – Bangkok
Hotel တွင် မနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် သဲဖြူကျွန်းကမ်းခြေသို့ သွားရောက်ကာပျော်ရွှင်စွာရေဆော့ ကစားပြီးနေ့လည်စာသုံးဆောင်ပါမည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ဘန်ကောက်မြို့သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာပါမည်။ ထို့နောက် ညစာကိုကျောက်ဖရား မြစ်ပေါ်တွင် ဘန်ကောက်မြို့၏ ညအလှကိုခံစားရင်း Chao Phraya Cruise Dinner ကိုသုံးဆောင်ကြပါမည်။
Day 03. Bangkok
Hotel တွင် မနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် ဘန်ကောက်မြို့ရှိအနောက်တိုင်းဗိသုကာလက်ရာများဖြင့် ပေါင်းစပ် ဖွဲ့စည်းထားသောဘုရင့်နန်းတော် ( Grand Palace ) နှင့် တန်ခိုးကြီး မြဘုရား ( Wat PhraKaew) သို့ သွားရောက် ဖူးမျှော်ပါမည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် လူကြီးလူငယ်မရွေးအပန်းဖြေဆော့ကစားနိုင်သော Dream World တွင် သွားရောက် ဆော့ ကစားကြပါမည်။ ညစာကိုစားသောက်ဆိုင်တွင် သုံးဆောင်ပြီး Hotel သို့ပြန်၍ တစ်ညတာအိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day 04. Bangkok – Yangon
Hotel တွင် မနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် Madame Taussaud နှင့် Sealife Ocean တို့ကိုသွားရောက် လည်ပတ်ပြီးနေ့လည်စာသုံးဆောင်ပါမည်။ ဘန်ကောက်မြို့တွင် ဈေးဝယ်ထွက်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သော Platinum Shopping Mall , Big C , Central World သို့ သွားရောက် ဈေးဝယ်ကြပါမည်။ ဘန်ကောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် မှတစ်ဆင့် ရန်ကုန်သို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင် ပေးပါမည်။
မနက်စာ၊ နေ့လည်စာ နှင့် ညစာတို့ပါဝင်ခြင်း (ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသည်မှအပ)